Mon, 23 May 2022 08:51:15 +0000
CITIZENS Coalition for Change secretary general for Manicaland was Sunday arrested for addressing a political [...] The post CCC official arrested appeared first on The Zimbabwe Mail.
Sun, 22 May 2022 22:00:34 +0000
A British lord yesterday said the United Kingdom had signed an agreement with Zimbabwe to [...] The post Did Zimbabwe sign an agreement with UK to accommodate asylum seekers? appeared first on The Zimbabwe Mail.
Sun, 22 May 2022 21:56:02 +0000
Some 20.8 million Nigerians, more than the entire population of Zimbabwe smoke mbanje according to [...] The post More Nigerians than the entire population of Zimbabwe smoke weed appeared first on The Zimbabwe Mail.
Sun, 22 May 2022 21:51:57 +0000
Zimbabwe cannot stabilise its local currency the way Zambia or Uganda or Tanzania did because [...] The post Zimbabwe cannot go the Zambia way to stabilise its currency because situations are different appeared first on The Zimbabwe Mail.
Sun, 22 May 2022 21:45:38 +0000
It is one thing to be promised marriage by your partner, perhaps in conversation during [...] The post ‘My brother promised lobola for 3 women, ghosted them on negotiation day and feels no remorse’ appeared first on The Zimbabwe Mail.
Sun, 22 May 2022 21:39:35 +0000
Have you ever told someone that you’re feeling sad, only to have them respond with [...] The post How to spot gaslighting in your relationship appeared first on The Zimbabwe Mail.
Sun, 22 May 2022 21:27:43 +0000
BERLIN (AP) — The COVID-19 pandemic is “most certainly not over,” the head of the [...] The post The COVID pandemic is ‘most certainly not over’ – WHO chief appeared first on The Zimbabwe Mail.
Sun, 22 May 2022 21:09:05 +0000
‘Lola’ is a fun, teen-like-romantic promise that is reasonably relatable. A mid-tempo Afrobeats bump with [...] The post Zimbabwean-born Voice UK winner Annatoria teams up with rising Afrobeats star Ishan on ‘Lola’: Watch appeared first on Th...
Sun, 22 May 2022 21:01:01 +0000
A telecoms entrepreneur who grew up in what is now Harare, Zimbabwe, without a phone [...] The post Rich List 2022: Strive Masiyiwa becomes Britain’s first black billionaire with £2bn fortune appeared first on The Zimbabwe Mail.
Sun, 22 May 2022 20:58:30 +0000
The US government through its embassy in Zimbabwe is involved in a series of anti-government [...] The post US’ brutal interference can’t be allowed to disrupt China-Zimbabwe cooperation appeared first on The Zimbabwe Mail.